Nagu saabsan - Yantai Changyou Glass Co., Ltd.
Dhalo Ruuxi ah
Cabitaannada aan khamriga lahayn
Yantai Changyou Glass Co., Ltd waxay in ka badan 16 sano khibrad u leedahay bixinta alaabada dhalada galaaska iyo xalalka xirmooyinka la xiriira. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay daboolayaan noocyada kala duwan ee muraayadaha, oo ay ku jiraan dhalada galaaska ruuxa, dhalooyinka khamriga, dhalooyinka galaaska biirka, dhalada cabitaanka, dhalada saliida lagama maarmaanka ah, dhalooyinka saytuunka, dhalooyinka qurxinta, dhalooyinka cuntada, dhalada daawada, iwm.
Warshaddeenna waxaa la aasaasay 2003, taas oo ka gudubtay shahaadada ISO22000, shahaadada UKS, iyo SA8000 masuuliyadda bulshada. Waxaan u qalabaynay 75 geed oo geed mitir laba jibbaaran ah oo leh farsamada Jarmalka SORG, tobanaan LS.machines ah iyo laba khadadka daabacaadda xawliga dheer leh oo xawaare sare leh oo laga keenay Yurub.
Shirkadeenu waxay ahmiyad gaar ah siisaa hal-abuurka farsamooyinka farsamada dheeri-ka-shaqeynta ee muraayadaha, waxaana si ballaaran u aqoonsan nahay oo aan ku kalsoon nahay Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo iyo noocyo kale oo khamri caan ah. Maahan oo kaliya keenista suuqa gudaha, wax soo saarkeena waxaa loo dhoofiyay in ka badan 30 dal oo adduunka oo idil ah. Suuqyadeenna ugu waaweyn waa Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Australia, Bariga Dhexe, Afrika, iyo wixii la mid ah.
Naqshadeynta qaabaysan, amarrada OEM iyo ODM ayaa si diirran loogu soo dhaweynayaa warshaddeenna tirada ugu yar ee ugu yar waxay naga dhigeysaa mid aad u jajaban oo la kulma baahiyaha macaamiisha badan. Faa'iidooyinkaas oo dhami waxay naga dhigayaan kuwa keena hal meel oo wax lagu wada baako
Faa'iidada alaabteennu waa tayada deggan. Tayadu waa nolosheena. Ma aha oo kaliya mashiinada xakamaynta tayada sare leh, waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo tayo sare leh oo 17 ah. 95% xubnahu waxay in kabadan 5 sano oo khibrad ah usocdaan. Nidaamkayaga Wadarta Waxsoosaarka Waxsoosaarka sidoo kale wuxuu ilaaliyaa awooda keenista biyo-mareenkeena.
Fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto oo waad ku qanci doontaa badeecadaheena aqoonta u leh iyo adeegga xirfadeed.
1. 18 sano oo khibrad ah soo saarista dhalooyinka quraaradaha ah.
2. Waxaan ku siin doonaa xulasho run ah oo hal-joogsi ah, maxaa yeelay sidoo kale waxaan si fiican u naqaannaa koofiyadaha dhalada, sumadaha birta, kartoonada, iwm.
3. Awood wax soo saar ka wanaagsan, tikniyoolajiyadda heerka koowaad iyo sannado waayo-aragnimo ah ayaa naga dhigi doonta mid ka dabacsan dhinacyada oo dhan marka loo eego xaaladaha kale.
4. Tayo isku mid ah, kharash badanna leh. Adeegsiga tiknoolajiyada ugu horumarsan ee soosaarida dhalooyinka miisaanka yar, iyadoo loogu tala galay hubinta tayada dhalooyinka, iyadoo si weyn u yareyneysa qarashaadka, taasoo dhalooyinkayaga uga dhigeysa kuwo ku tartamaya suuqa. Dalka Shiinaha, ma jiraan wax ka badan 3 warshadood oo quraarad ah oo leh tiknoolojiyad fudud oo dhalo ah. Waxaan ka mid nahay kuwa ugu fiican.
5. Falsafadeena: Macaamiisha marwalba waa saxan yihiin, tayada iyo sumcadda ayaa ka muhiimsan macaashka. Shaqadeena oo dhami waa iskaashi guul-guul ah oo muddo-dheer ah oo lala yeesho macaamiisha, maahan oo keliya xiriirka iibka.
6.Our-iibka ka dib adeegga: heerka pass ee wax soo saarka our ayaa gaadhay 99.98%. Waxaan sii wadi doonnaa wanaajinta tayada wax soo saarkadeena. Haddii dhibaato jirto, ma dooran doonno inaan u baxno sida warshadaha kale. Taa baddalkeeda, waxaan dhisi doonnaa koox khubaro ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si ay u soo jeediyaan xalka iyo qorshooyinka magdhawga ee dhibaatooyinka soo kordha. Waxaan masuul ka noqon doonaa alaabtayada.
Cinwaanka:Qolka 1708, Dhismaha Jiuqi, 16 Xingyuan Road, Degmada Zhifu, Magaalada Yantai, Gobolka Shandong
Telefoonka gacanta:0086 13589892639